သုံး လသာ….. ခံတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် … သက်ေ တာ် ၉၀ အ ထိ …. လက် ရှိနေထိုင်နေသော အသဲ ကင်ဆာ ပျောက်ဆေး – Shwewiki.com
သုံး လသာ….. ခံတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် … သက်ေ တာ် ၉၀ အ ထိ …. လက် ရှိနေထိုင်နေသော အသဲ ကင်ဆာ ပျောက်ဆေး
ဒီေ ဆးနည်း သိတာကြာပါပြီ။ ဆေးပင်ဓါတ်ပုံမရှိတာနဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဓါတ်ပုံရပြန်တော့လည်း အလုပ်များနေတာနဲ့ မရေးဖြစ် ပြန်ဘူးလေ။ တေလာက အမရပူရမြို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်က သူငယ်ချင်း စာချဘုန်းကြီးတစ်ပါး အသဲကင်ဆာဖြစ်လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံ တက်တဲ့အကြောင်း သူ့တပည့်ရဲ့ FB မှာတွေ့ရတယ်။
ဒီဆေး နည်းလေး ပြောပြလိုက်ပါလို့တော့ ပြောမိရဲ့။ ပြောသလားတော့ မသိ။ ယနေ့တော့ ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းသူတစ်ဦးရဲ့ဆွေမျိုးတစ်ဦး အသဲကင်ဆာဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပြန်တယ်။ သူ့ဆွေးမျိုးက မြန်မာပြည်မှာပါ။ အသဲကင်ဆာဆိုရင် ဆေးနည်းရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်မိတယ်။သူက အပူတပြင်းတောင်းတယ်လေ။
ခုလာယူရမလားတဲ့။ ဆေးမရှိပါ။ ဆေးနည်းသာ သိထားတာပါ။ ဆေးကုတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးလည်း မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကူညီချင်တယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီဆေးနည်းကို မရေးမဖြစ်တော့ အမြန်ရေးလိုက်ရတယ်။ ရေးဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းပေးလို့လဲ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။
ဆေးနည်းတို (ဆေးမြီးတို) ဆိုတော့ လူတွေက သိပ်လည်း တန်ဖိုးမထား တတ်ကြဘူးလေ။ ဆေးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တန်ဖိုးက သိပ်မရှိတော့ တန်ဖိုးမရှိသလို ထင်ပြီး တန်ဖိုးမထားတတ်တာ ထင်ပါရဲ့။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဆေးရဲ့ သမိုင်းအကျဉ်းလေး ပြောပြပါရစေ။ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဝန်သိုစာသင်တိုက်က ဆရာတော်ကြီးက သက်တော် ၉၀ ရှိပါပြီ။
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနက အဖွဲ့မှ အနားယူနေတဲ့ နိုင်ငံတော် သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးပါ။ အဘိ ဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု စတဲ့ ဘွဲ့တံဆိတ်များကိုလည်း ရရှိထားတဲ့ ဆရာတော်ကြီးပါ။ ဘွဲ့တော်က ဘဒ္ဒန္တ သီလဝံသ လို့ ထင်ပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က အသဲကင်ဆာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်လို့မို့ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ရန်ကုန်ပင့်ပြီး ကုသပါတယ်။ ဆေးရုံက သုံးလသာ ခံတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မရရင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ဆေးရုံတွေမှာ ရနိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဘန်ကောက်ကိုပို့ပြီး ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ကောက်ဆေးရုံကလည်း ရောဂါလွန်နေပြီးမို့ သုံးလသာ ခံတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးက လက်လျှော့ပြီး ဆရာတော်ကြီးကို ပြန်ပင့်လာကြတယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံတောင်မှ မထားတော့ပါဘူး။ မြစ်ကြီးနား ဝန်သိုကျောင်းတိုက်အထိ ပြန်ပို့ပေးကြပါတယ်။
အသက်ရှိနေတုန်း ပြန်ပို့တဲ့ သဘောပေါ့လေ။ သယ်ယူတဲ့ ဒုက္ခတွေ မများပဲ ဈာပနကိစ္စတွေ စီစဉ်နိုင်အောင်လို့ မူလကျောင်းအထိ ပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ ဆိုရမလိုပါပဲ။ သက်တော်ကလည်း ၉၀။ ရောဂါကလည်း ကျွမ်းနေပြန်၊ ဖြစ်တာကလဲ သိပ်နုတဲ့ အသဲ (အသည်း)။ မျှော်လင့်ချက်က သိပ်နည်းလွန်းနေပြီလေ။
တနည်းတော့လည်း သုံလအတွင်းမှာ စီစဉ်သင့်တာတွေ စီစဉ်၊ တပည့်ဒါယကာ ဒါယိကာမတွေလည်း အားရအောင် ဖူးမျှော်ရအောင်ပေါ့။ ခုလို့ မူလကျောင်း ပြန်ပို့လိုက်တာလဲ သိပ်မှန်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဆေးရုံမှာထားရင် ဆေးရုံများကပြောသလို သုံးလပြည့်ရင် ပျံလွန်တော်မူမှာ သေခြာသလောက်ပါ။ ကျောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ သစ်သီး သစ်ရွက် ဆေးနည်းကိုမှီဝဲ သုံးဆောင်တော်မူပါတယ်။
တစ်လလောက်သောက်ပြီးတဲ့အခါ အတော်လေး ကျန်းမာလာတယ်။ အစားအသောက်တွေလည်း ပြန်ကောင်းလာတယ်။ အသားအရေတွေလည်း ပြန်ပြီး စိုပြေလာတယ်။ မြန်မာဆေးလေးကိုသောက်ပြီး သုံးလဆိုတဲ့ နေ့လေးကို ရင်တမမနဲ့ စောင့်နေခဲ့ကြတယ်။ သုံလပြည့်တော့လည်း လန်လန်းဆန်ဆန်း၊ ပိုလို့တောင် ကျန်းမာလာပါတယ်။
သုံးလကျော် လေးလစွန်းတော့ အခြေအနေသိရအောင်လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကို ပြန်ပြီး စစ်ဆေးပါတယ်။ အဖြေက- အသဲကင်ဆာ မရှိတော့ပါ တဲ့။ သုံးလဆရာတော်ကြီးဟာ ယခုဆို ၂-နှစ်ကျော်လို့ သုံးနှစ်တောင် ပြည့်ပါတော့မယ်။ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဝန်သိုလ်ကျောင်းတိုက်မှာ သီတင်းသုံးတော်မူလျှက်ပါ။
(လွန်ခဲ့တဲ့ ၇-နှစ်လောက်က စာရေးသူ မြတ်ပဋ္ဌာန်း မြစ်ကြီးနားရောက်စဉ်က ဖူးမြှော်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အလွန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့အပြင် ခင်မင်စရာ ချစ်ခင်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။)
ဆရာတော်ကြီးကျန်းမာနေပုံကို ဖူးမြင်ရအောင်လို့ ဒီနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းက တိပိဋကဆရာတော် ငါးပါး ဆရာတော်ကြီးကို ဖူမြှော်နေသည့် ဓါတ်ပုံပါ ပူးတွဲပြလိုက်ပါတယ်။ (မြင်းခြံတိပိဋက ဆရာတော် ဦးဂန္ဓမာလာ၏ FB မှ ကူးယူထားတာပါ။)
(၁) နံနက်ပိုင်းမှာ ကညွတ်ပင် သတ္ထုရည် (အပင်ကို ထုထောင်းပြီး အရည်ညှစ်တယ်) ၎င်းအရည် မတ်ခွက် တစ်ခွက် တိုက်ပါတယ်။
(၂) နေ့လည်မှာ မြေရှောက်ဆီးဖြူ (တောဆီးဖြူ လို့လည်းခေါ်တယ်) ၎င်းအပင် ပဉ္စငါးပါး (တပင်လုံး)ကို သုံးခွက် တစ်ခွက် ကြို ပြီး မတ်ခွက် တစ်ခွက် တိုက်ပါတယ်။
(၃) ညနေမှာ မင်းကွတ်သီးကို အညှာမှတပါး အားလုံးကို ကြိတ်ခြေပြီး ဟင်းစားဇွန်းကြီး တစ်ဇွန်းတိုက်ပါတယ်။(မင်းကွတ်သီးကို ကြိတ်ပြီး ထန်းလျက် အနည်းငယ်နှင့်ကြို။ ရေခဲသေတ္တာမှာသိမ်းပါက အဆင်ပြေတယ်။ မကြိုက မှိုတက်တယ်။)
ဒီ ဆေးသုံးမျိုးကို နေ့စဉ်တိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီး၏ အနီးနေ တပည့်ကြီး ဦးကေတုမာလာ(မြစ်ကြီးနားဆရာတော်) ပြောပြ၍ သိရခြင်းပါ။ လက်တွေ့ဆေးနည်းပါ။ (ဆေးပစ္စည်း အပင် အသီးများကိုလည်း ပူးတွဲဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။)
အသဲ ကင်ဆာ ဝေဒနာရှင်များ ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲပြီး ပျောက်ကင်းကြပါစေလို့ စေတနာ မေတ္တာဖြင့် ဆုတောင်းပတ္ထနာ ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဆေးနည်းကုသိုလ်ကြောင့် မအို မနာ မသေရာ “အမတ” ကို အမြန်ရ ရပါလို၏။
သုံးလသာ….. ခံတော့မယျဆိုတဲ့ဆရာတျောကွီးကိုယျတိုငျ … သကျတျော ၉၀ အထိ …. လကျရှိနထေိုငျနသေော အသဲကငျဆာ ပြောကျဆေး
ဒီဆေးနညျး သိတာကွာပါပွီ။ ဆေးပငျဓါတျပုံမရှိတာနဲ့ မရေးဖွဈခဲ့ဘူး။ ဓါတျပုံရပွနျတော့လညျး အလုပျမြားနတောနဲ့ မရေးဖွဈ ပွနျဘူးလေ။ တလောက အမရပူရမွို့၊ မဟာဂန်ဓာရုံကြောငျးတိုကျက သူငယျခငျြး စာခဘြုနျးကွီးတဈပါး အသဲကငျဆာဖွဈလို့ ရနျကုနျဆေးရုံ တကျတဲ့အကွောငျး သူ့တပညျ့ရဲ့ FB မှာတှရေ့တယျ။
ဒီဆေး နညျးလေး ပွောပွလိုကျပါလို့တော့ ပွောမိရဲ့။ ပွောသလားတော့ မသိ။ ယနတေ့ော့ ပဋ်ဌာနျးသငျတနျးသူတဈဦးရဲ့ဆှမြေိုးတဈဦး အသဲကငျဆာဖွဈနတေယျလို့ သိရပွနျတယျ။ သူ့ဆှေးမြိုးက မွနျမာပွညျမှာပါ။ အသဲကငျဆာဆိုရငျ ဆေးနညျးရှိတယျလို့ ပွောလိုကျမိတယျ။သူက အပူတပွငျးတောငျးတယျလေ။
ခုလာယူရမလားတဲ့။ ဆေးမရှိပါ။ ဆေးနညျးသာ သိထားတာပါ။ ဆေးကုတတျတဲ့ဘုနျးကွီးလညျး မဟုတျပါ။ ဒါပမေဲ့ တတျနိုငျသလောကျတော့ ကူညီခငျြတယျပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ဒီဆေးနညျးကို မရေးမဖွဈတော့ အမွနျရေးလိုကျရတယျ။ ရေးဖွဈအောငျ တိုကျတှနျးပေးလို့လဲ ကြေးဇူးတငျရပါတယျ။
ဆေးနညျးတို (ဆေးမွီးတို) ဆိုတော့ လူတှကေ သိပျလညျး တနျဖိုးမထား တတျကွဘူးလေ။ ဆေးရဲ့ကုနျကစြရိတျတနျဖိုးက သိပျမရှိတော့ တနျဖိုးမရှိသလို ထငျပွီး တနျဖိုးမထားတတျတာ ထငျပါရဲ့။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီဆေးရဲ့ သမိုငျးအကဉျြးလေး ပွောပွပါရစေ။ မွဈကွီးနားမွို့၊ ဝနျသိုစာသငျတိုကျက ဆရာတျောကွီးက သကျတျော ၉၀ ရှိပါပွီ။
နိုငျငံတျော သံဃမဟာနက အဖှဲ့မှ အနားယူနတေဲ့ နိုငျငံတျော သွဝါဒါစရိယ ဆရာတျောကွီးပါ။ အဘိ ဓဇမဟာရဋ်ဌဂုရု စတဲ့ ဘှဲ့တံဆိတျမြားကိုလညျး ရရှိထားတဲ့ ဆရာတျောကွီးပါ။ ဘှဲ့တျောက ဘဒ်ဒန်တ သီလဝံသ လို့ ထငျပါတယျ။
ဆရာတျောကွီးမှာ ၂၀၁၃ ခုနှဈက အသဲကငျဆာ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံတျောရဲ့ဆရာတျောကွီးဖွဈလို့မို့ နိုငျငံတျော အစိုးရက ရနျကုနျပငျ့ပွီး ကုသပါတယျ။ ဆေးရုံက သုံးလသာ ခံတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျ ပေးလိုကျပါတယျ။ မွနျမာပွညျမှာ မရရငျ ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျမွို့ဆေးရုံတှမှော ရနိုငျကောငျးရဲ့ဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ နိုငျငံတျောအစိုးရက ဘနျကောကျကိုပို့ပွီး ကုသပေးခဲ့ပါတယျ။
ဘနျကောကျဆေးရုံကလညျး ရောဂါလှနျနပွေီးမို့ သုံးလသာ ခံတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျပေးလိုကျပါတယျ။ အားလုံးက လကျလြှော့ပွီး ဆရာတျောကွီးကို ပွနျပငျ့လာကွတယျ။ ရနျကုနျဆေးရုံတောငျမှ မထားတော့ပါဘူး။ မွဈကွီးနား ဝနျသိုကြောငျးတိုကျအထိ ပွနျပို့ပေးကွပါတယျ။
အသကျရှိနတေုနျး ပွနျပို့တဲ့ သဘောပေါ့လေ။ သယျယူတဲ့ ဒုက်ခတှေ မမြားပဲ ဈာပနကိစ်စတှေ စီစဉျနိုငျအောငျလို့ မူလကြောငျးအထိ ပွနျပို့လိုကျတယျလို့ ဆိုရမလိုပါပဲ။ သကျတျောကလညျး ၉၀။ ရောဂါကလညျး ကြှမျးနပွေနျ၊ ဖွဈတာကလဲ သိပျနုတဲ့ အသဲ (အသညျး)။ မြှျောလငျ့ခကျြက သိပျနညျးလှနျးနပွေီလေ။
တနညျးတော့လညျး သုံလအတှငျးမှာ စီစဉျသငျ့တာတှေ စီစဉျ၊ တပညျ့ဒါယကာ ဒါယိကာမတှလေညျး အားရအောငျ ဖူးမြှျောရအောငျပေါ့။ ခုလို့ မူလကြောငျး ပွနျပို့လိုကျတာလဲ သိပျမှနျတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဆေးရုံမှာထားရငျ ဆေးရုံမြားကပွောသလို သုံးလပွညျ့ရငျ ပြံလှနျတျောမူမှာ သခွောသလောကျပါ။ ကြောငျးပွနျရောကျတဲ့အခါမှာ သဈသီး သဈရှကျ ဆေးနညျးကိုမှီဝဲ သုံးဆောငျတျောမူပါတယျ။
တဈလလောကျသောကျပွီးတဲ့အခါ အတျောလေး ကနျြးမာလာတယျ။ အစားအသောကျတှလေညျး ပွနျကောငျးလာတယျ။ အသားအရတှေလေညျး ပွနျပွီး စိုပွလောတယျ။ မွနျမာဆေးလေးကိုသောကျပွီး သုံးလဆိုတဲ့ နလေ့ေးကို ရငျတမမနဲ့ စောငျ့နခေဲ့ကွတယျ။ သုံလပွညျ့တော့လညျး လနျလနျးဆနျဆနျး၊ ပိုလို့တောငျ ကနျြးမာလာပါတယျ။
သုံးလကြျော လေးလစှနျးတော့ အခွအေနသေိရအောငျလို့ ရနျကုနျဆေးရုံကို ပွနျပွီး စဈဆေးပါတယျ။ အဖွကေ- အသဲကငျဆာ မရှိတော့ပါ တဲ့။ သုံးလဆရာတျောကွီးဟာ ယခုဆို ၂-နှဈကြျောလို့ သုံးနှဈတောငျ ပွညျ့ပါတော့မယျ။ ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ မွဈကွီးနားမွို့၊ ဝနျသိုလျကြောငျးတိုကျမှာ သီတငျးသုံးတျောမူလြှကျပါ။
(လှနျခဲ့တဲ့ ၇-နှဈလောကျက စာရေးသူ မွတျပဋ်ဌာနျး မွဈကွီးနားရောကျစဉျက ဖူးမွှျောခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ အလှနျကွညျညိုစရာကောငျးတဲ့အပွငျ ခငျမငျစရာ ခဈြခငျစရာ ကောငျးလှပါတယျ။)
ဆရာတျောကွီးကနျြးမာနပေုံကို ဖူးမွငျရအောငျလို့ ဒီနှဈ နှဈဦးပိုငျးက တိပိဋကဆရာတျော ငါးပါး ဆရာတျောကွီးကို ဖူမွှျောနသေညျ့ ဓါတျပုံပါ ပူးတှဲပွလိုကျပါတယျ။ (မွငျးခွံတိပိဋက ဆရာတျော ဦးဂန်ဓမာလာ၏ FB မှ ကူးယူထားတာပါ။)
(၁) နံနကျပိုငျးမှာ ကညှတျပငျ သတ်ထုရညျ (အပငျကို ထုထောငျးပွီး အရညျညှဈတယျ) ၎င်းငျးအရညျ မတျခှကျ တဈခှကျ တိုကျပါတယျ။
(၂) နလေ့ညျမှာ မွရှေောကျဆီးဖွူ (တောဆီးဖွူ လို့လညျးချေါတယျ) ၎င်းငျးအပငျ ပဉ်စငါးပါး (တပငျလုံး)ကို သုံးခှကျ တဈခှကျ ကွို ပွီး မတျခှကျ တဈခှကျ တိုကျပါတယျ။
(၃) ညနမှော မငျးကှတျသီးကို အညှာမှတပါး အားလုံးကို ကွိတျခွပွေီး ဟငျးစားဇှနျးကွီး တဈဇှနျးတိုကျပါတယျ။(မငျးကှတျသီးကို ကွိတျပွီး ထနျးလကျြ အနညျးငယျနှငျ့ကွို။ ရခေဲသတ်ေတာမှာသိမျးပါက အဆငျပွတေယျ။ မကွိုက မှိုတကျတယျ။)
ဒီ ဆေးသုံးမြိုးကို နစေ့ဉျတိုကျပါတယျ။ဆရာတျောကွီး၏ အနီးနေ တပညျ့ကွီး ဦးကတေုမာလာ(မွဈကွီးနားဆရာတျော) ပွောပွ၍ သိရခွငျးပါ။ လကျတှဆေ့ေးနညျးပါ။ (ဆေးပစ်စညျး အပငျ အသီးမြားကိုလညျး ပူးတှဲဖျေါပွလိုကျပါတယျ။)
အသဲ ကငျဆာ ဝဒေနာရှငျမြား ယုံယုံကွညျကွညျသုံးစှဲပွီး ပြောကျကငျးကွပါစလေို့ စတေနာ မတ်ေတာဖွငျ့ ဆုတောငျးပတ်ထနာ ပွုလိုကျပါတယျ။ ဆေးနညျးကုသိုလျကွောငျ့ မအို မနာ မသရော “အမတ” ကို အမွနျရ ရပါလို၏။
ဖားေ အာက်တောရဆရာတော်ကြီး မိန့် တဲ့ အိမ်တစ်အိမ် မှာ စီးပွားရေးတွေပြေလည်နေ ရ တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက်
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ ပညာရပ်များထဲက “ အမြဲတမ်း ငွေမပြတ်စေ တဲ့ ယတြာ ”